Home / Blog / Blog Full WidthPage 2
AHRN နှင့် Best Shelter မှ (၅) နှစ်မြောက် NSATM ဆိုင်ပိုင်ရှင်များ အားအသိပညာပေးမြှင့်တင်ပေးခြင်းနှင့် အသိအမှတ်ပြု ကျေးဇူးတင်ရှိ ခြင်းအစည်းအဝေး’ကို ယနေ့ နိုဝင်ဘာ (၃၀)တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုဆိုင်ရှင်များအားလုံးသည်အလွန်ဝေးလံခေါင်သီသောကျေးလက်ဒေသများတွင်နေထိုင်သော မူးယစ်ဆေးအကြောတွင်းထိုးသွင်းသုံးစွဲသူများ နှင့် ၄င်းတို့၏မိသားစုဝင်များကို လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအခြေပြု အသက်ကယ် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများပေးနေသည့် ဆိုင်ပိုင်ရှင်များဖြစ်ပါသည်။
ဆိုင်ပိုင်ရှင်များအနေဖြင့်များစွာသော Community Prevention Workers များနှင့်လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့ပြီး၊ မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲသူ ဘဝတူ များအားအရေးကြီးသော စိတ် – လူမှုရေးနှင့်ကျန်းမာရေး ၀န်ဆောင်မှုများနှင့်ချိတ်ဆက်ပေးသည်။
ထိုဆိုင်ပိုင်ရှင်များကိုဂုဏ်ပြုပါတယ်။ သင်တို့အားလုံးကို ကျွနု််ပ်တို့၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် မိတ်ဆွေများအဖြစ်ဖြင့် ရရှိခြင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်ယူပါသည်။
ဤအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအစီစဉ်ကို AHF, UHF နှင့် Global Fund ရံပုံငွေအဖွဲ့တိုမှ ပံ့ပိုးကူညီပါသည်။
Today is the ‘5th Annual NSATM Owners Awareness Raising and Appreciation Meeting’ where AHRN and Best Shelter show their gratitude to the many shop owners who provide life-saving community-based services to clients who live in far hard-to-reach rural areas.
During the COVID-19 period shop owners not only provide 24/7 clean needles through Needle and Syringe Automated Machines (#NSATM), but increasingly provide also HIV and TB referral to AHRN clinics, provide important community advocacy and health education, as well as provide access to condoms.
The shop owners, of which many trained as Community Prevention Workers, together with Peers connect clients to critical psycho-social and health services.
Bravo and congratulations Shop Owners! We are Proud to have you as colleagues and friends!
This workshop is funded by AHF, UHF and Global Fund.
#NSATM #AHRN #BestShelter #HIV #TB #HarmReduction #GFATM #AHF #UHF
28/11/2020 by AHRN IT Posted in Activities, Home-Slider
24/11/2020 by albert wilson Posted in Activities, Home-Slider, slider
22/10/2020 by AHRN IT Posted in Activities, Home-Slider
မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူတစ်ယောက်…. မူးယစ်နွံထဲက ဘယ်လိုကြိုးစားပြီးထွက်ခဲ့ရတယ်…
AHRN ရဲ့ ဆေးခန်းက ဘယ်လိုကြိုဆိုတယ်….
ِClient တယောက်ရဲ့ ရင်တွင်းခံစားချက် ကိုရေးထားတဲ့ ကဗျာလေးပါ။